MUSHARAX JAMAAL CALI XUSEEN OO ODAYAASHIISA U BANDHIGAY DOODIISA MUSHARAXNIMO | Saxil News Network
MUSHARAX JAMAAL CALI XUSEEN OO ODAYAASHIISA U BANDHIGAY DOODIISA MUSHARAXNIMO
December 3, 2015 - Written by admin
Hargeysa (SAXILNEWS.COM)_Musharraxa Jagada madaxweynenimo ee xisbiga Caddaalada iyo daryeelka(Ucid)Md Jamaal Cali Xuseen, ayaa maalintii shalay Kulan albaabadu u xidhnaayeen Magaalada Hargeysa kula yeeshay Qaar kamid ah Madax-dhaqameed beelaha subeer Awal, waxaana uu odayaasha u bandhigay Baahida loo qabo inay qayb ka noqdaan dhibaato uu sheegay inuu Guddoomiyaha Xisbigaas Faysal Cali-waraabe ku Hayo musharraxnimadiisa.
Xubnaha Kulankan ka qaybgalay oo dhammaantood ahaa kuwa la aragti ah Musharraxa Jamaal Cali Xuseen, oo shalay hadhimo isugu yimi Hotel-ka Diiriye ee Magaalada Hargreysa, ayaa gelinkii dembe ee shalay jilbaha u laabtay fadhi ay ku yeesheen aqalka Musharraxa.
Kulankan, ayaa sida wargeyska Hubaal ilo u dhuun daloola ka helay, lagu gorfeeyey arrimo badan oo u badnaa cabasho uu Jamaal Cali Xuseen ka sheeganayo Guddoomiye Faysal Cali-waraabe, waxana uu odayaasha ka dalbaday inay kala hawl galaan sidii ay arrimaha murugsan ula furdaamin lahaayeen.
Xogaha aanu Kulankaas ka helayno, ayaa sheegay in Jamaal si adag odayaasha beeshiisa kasoo jeeda ugu bandhigay Lacago xad-dhaaf ah oo uu sheegay inuu Xisbiga Ucid Geliyey, isla-markaana sida uu ku andacoonayo uu Guddoomiye Faysal dafirsan yahay.
Waxa kale oo uu Jamaal Odayaasha u sheegay inuu aaminsan yahay in gardarro caddaan ah lagu hayo, isla-markaana Baahi badan loo qabo in garab iyo gaashaan in uu u helo raacdada Xuquuq uu sheegay inay dhinaca Xisbiga UCID kaga maqan tahay.
Waxa kale oo uu si cad u carrabaabay lacagaha uu sheegayo inay xisbiga ka galeen oo u baahan inaan muran la gelin, isagoo halkaasi ka sheegay in musharraxnimadiisu tahay wax geed-ka-go’an ah oo aan haba yaraatee Su’aal la gelin Karin, maadaama uu jiro heshiis cad oo uu la galay Guddoomiye Faysal Cali-waraabe.
Musharraxa Jamaal ayaa odayaasha usoo jeediyey inuu isu arko qof la dulmiyey oo hiil u baahan, isla-markaana Odayaasha looga baahan yahay inay Guddoomiyaha Ucid ku cadaadiyaan inuu joojiyo tallaabooyinka uu ku doonayo in Xisbiga musharraxnimadiisa loo tartamo.
Sidoo kale waxa uu Musharrax Jamaal odayaasha ku adkeeyey inay Madax-dhaqameedka kale ee Beesha iyo inta la aragtida ahba ku dirqiyaan inay raadiyaan xuquuda uu sheegay inay ka maqan tahay, isla-markaana si midaysan u wajahaan cidda uu ka cabanayo oo ah Guddoomiye Faysal Cali-waraabe. Odayaashii Kulankaas ka qaybgalay oo ay xubno ka ahaayeen Suldaan Mawliid-sabayso iyo waliba Suldaan Indha-case, ayaa La sheegayaa inay badiba soo jeedimihii Jamaal Madaxa u ruxeen inkastoo xubnaha halkaasi fadhiyey u badnaayeen Qaar marka horeba aaminsanaa Aragtida Musharraxa Jamaal Cali xuseen. Ugu dambayntii waxa la isku afgartay in ballan dambe la iskugu yimaaddo, isla-markaana ay madax-dhaqameedku si gaar ah arrintaas uga hawl galaan, iyagoo sidoo kale kulamo ay Guddoomiyaha UCID kaga cabanayana la yeelan doona Madax-dhaqameedka Beesha Koonfurta Hargeysa, iyadoo wixii kharashaad ah ee Kulamadaas ku bixi doonana uu bixin doono Musharrax Jamaal Cali Xuseen.